Neymar Jr Waxa Uu Doonayaa In Uu Barcelona Ku Soo Laabto, Raaxo Ayuu Ku Daremeeyay, Laba Sababood Ayuuna U Soo Laaban Karin. - GOOL24.NET
Neymar Jr Waxa Uu Doonayaa In Uu Barcelona Ku Soo Laabto, Raaxo Ayuu Ku Daremeeyay, Laba Sababood Ayuuna U Soo Laaban Karin.
November 6, 2018 Mahamoud Batalaale
Neymar Jr ayaa xagaagii 2017 kii si muran wayni ku jiray uga baxay kooxda uu sida cajiibka ah ula qabsaday ee Barcelona wuxuuna lacag rekood aduun ahayd uu ugu biiray kooxda uu hadda ka tirsan yahay ee PSG, laakiin xidiga ree Brazil ayaa dareemay in uu qaatay go’aan qalad ahaa taas oo uu u sheegay asxaabtiisii hore ee Camp Nou.
Xidigii hore ee kooxda Barcelona ee ay Neymar Jr soo wada ciyaareen ee Martin Montoya ayaa sheegay in Neymar Jr uu doonayo in uu dib ugu soo laabto Barcelona sababtoo ah in uu Camp Nou raaxo ku dareeyay waqtigii uu joogay.
Laakiin Martín Montoya ayaa laba sababood salka u saaray in Neymar Jr aanu ugu soo laaban karin kooxdoodii hore ee Barcelona wuxuuna ku dooday in marka hore ayna Barcelona diyaar u ahayn in ay bixiso isla lacagtii ay PSG kula wareegtay Neymar Jr.
Mar labaadka Montoya ayaa sheegay in kooxda PSG ayna si sahlan ku fasixi karin Neymar Jr isla markaana labadan sabab ay yihiin kuwa Neymar Jr ka hor joogsan kara in uu ku soo laabto kooxdii uu waqtiga fiican u soo qaatay ee Barcelona.
Martin Montoya ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in Nemyar uu doonayo in uu ku soo laabto Barcelona, sababtoo ah raaxo ayuu dareemay wuxuuna la qabsaday intii lagu guda jiray saddexdii sanadood ee uu kooxda joogay. Waxa uu xidhiidh layaableh la lahaa Luis Suarez iyo Messi”.
Intaa kadib Montoya ayaa ka waramay sababta ay Neymar Jr ugu adkaan karto in uu markale ku soo laabto Barca wuxuuna yidhi: “PSG sidoo kale waa koox wayn oo haysata team fiican isla markaana anigu ma filayo in ay si sahlan isaga ku sii dayn karan. Isaga lacag badan ayay ka bixiyeen, sidoo kale ma filayo in Barcelona ay lacag la mid ah ka bixinayso si ay isaga dib guu soo celiso”.
Ugu danbayn Montoya oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Barcelona iyo Inter Milan ayaa ka hadlay kulanka caawa ee kooxihiisi hore dhex mari doona wuxuuna yidhi: “Barca waa Barca. Iyagu waa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican, markasta ayayna ku garaaci kartaa, waxay haystaan ciyaartoy fantastik ah. Eeg Tottenham, waxay haystaan koox fiican waxaana lagu garaacay Wembley. Ciyaartu (Inter-Barca) waa mid isku dhaw laakiin waxaan waxaan filayaa in ay Barcelona ugu cad cadahay”.